Ogaden News Agency (ONA) – Meles Socoye Itobiya miyay raaci doontaa siday ahaan jireen xukuumadaha Kali-Talisyada
Meles Socoye Itobiya miyay raaci doontaa siday ahaan jireen xukuumadaha Kali-Talisyada
Madaxwaynihii hore ee Mozambique General Samora Michel markuu ku geeriyooday shil diyaaradeed 1986dii ayuu Col. Mengistu Hailemaryam oo ay Gen. Samora Michel saxiib ahaayeen si toos ah TV-ga Ethiopia uga sheegay in uusan dhimanin Samora, ee uu nool yahay iyada oo lawada ogyahay in Gen. Samora, ku geeriyooday shil diyaaradeed.
Arintaa iyo kuwa kale oo la mid ah ayuu qoraaga maqaalkan aadka u xiisaha badan mudane Xassan Macallin ku falanqaynayaa arimaha ka socda Itobiya hadda isagoo tusaalooyin u soo qaadanay taariikhda dalkaa oo bar-bardhigaya meela kala duwan oo caalamka ka mid oo xukuumdo Kali-Talis ah ay ka jireen waxyaabihii ka soo dhacay. Arimaha uu xusay waxaa ka mid ah in hadda ka hor markii uu dhintay boqorkii Ethiopa ka talinayay ee emperor Menelik (1844-1913) ay golaha wasiirada ee Ethiopia ay go’aan ku gaadheen in aynan dadwaynaha Ethiopia arrintaas la socodsiinin. Waxay ay qarinayeen dhimashada Menelik 2aad mudo sadex sano ah iyada oo dhaxalkii lagu wareejiyay Lij Iyasu oo uu awow u ahaa. Sababta ay u qarinayeen dhimashada boqor Menelik-na waxay la mid tahay buu yidhi qoraaga mida maanta haysata ee ah; Yaa qabsan xukunka wadanka, iyo waa la ina soo weerari iyo waxyaabo la mid ah ileen markii horeba ma ahayn xukuumad cadaalad ku dhisan e.
Wuxuu sheegay qoraaga inkastoo kuwa dhaxaltooyada sugaya ay qarinayaan in uu Kaligii Taliiye Meles geeriyooday, waxaa soo baxaya warar badan oo xaqiijinaya in uu dhinac u batay oo haddii usan dhimanina waa haddii uu Kooma ku jiro sidii Sharon oo kale ah.
Maqaalkan oo aad ka ogaan doonto looltanka siyaasiga ah ee ka socda Itobiya iyo sida ay ku dambayn doonto waxaad ka akhrisaa;
war bahasha halla iska dhiciyo waan ujeednaa khayaanadeedii waa billaabatay e
dadoow yaa la is dhigannin halgan haloo diyaar garoobo